Ọ bụ eziokwu na Modafinil na-eme ka brainpowder na-arụ ọrụ nke ọma? | AASRAW raw
/blog/modafinil/Ọ bụ eziokwu na Modafinil na-enyere ụbụrụ aka na-arụ ọrụ nke ọma Mgbe ọ nwụsịrị?
Ihe na 02 / 12 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na modafinil.
Ọ bụ n'ezie na Modafinil na-eme ka ụbụrụ dịkwuo ụba arụ ọrụ ọma Mgbe ị nachara?
1.What bụ ụdị modafinil? 2.How bu oru modafinil?
3.How Iji jiri modafinil? 4.Olee ka m ga - eji modafinil (Provigil)?
5.The mmetụta nke modafinil raw ntụ ntụ 6.Ọ dị mma maka modafinil na boosting brainpowder
7.Howụ ka ịzụta modafinil raw ntụ ntụ online?
Modafinil raw ntụ ntụ
|. Modafinil raw ntụ ntụ Nootropics isi Characters:
Molekụla Formula: C15H15NO2S
Ọbara arọ: 273.35
Nchekwa Nche: Na-echekwa na + 4 Celsius C
1.What bụ ụdị Modafinil?
Modafinil a na - eji ọgwụ ụbụpsy (ọnọdụ nke na - akpata oké ụra ehihie) ma ọ bụ gbanwee nsogbu ụra nke ihi ụra (ihi ụra mgbe a na - ebute oge awa na ike ịda ụra ma ọ bụ na - ehi ụra n'oge awa ụra na - ehi ụra na ndị na - arụ ọrụ n'abalị ma ọ bụ na - ). A na-ejikwa modafinil yana ngwaọrụ na-eku ume ma ọ bụ ọgwụgwọ ndị ọzọ iji gbochie ụra oké ụra nke ọrịa mkparụ ụka na-egbochi ọrịa sleep / hypopnea obstructive (OSAHS; nsogbu ụra nke onye ọrịa ahụ na-akwụsị ịnwụ ma ọ bụ na-eku ume ọtụtụ ugboro n'oge ụra, n'ihi ya, ọ dịghị ezuru ụra zuru ezu). Modafinil nọ na ngalaba ọgwụ a na-akpọ ịkwalite ịkwalite mmadụ. Ọ na-arụ ọrụ site n'ịgbanwe ụdị ihe ụfọdụ dị na ụbụrụ nke na-achịkwa ụra na ịtụ anya.
2.Olee ka Modafinil Work?
Modafinil bụ ọgwụ a maara nke ọma iji mee otu ihe: nọgide na-amụ anya. Ugbu a, ị nụla na onye ọ bụla sitere na Tim Ferriss na Dave Asprey President Obama ewerela Modafinil n'oge ụfọdụ.
Ọ bụghị naanị ha. Ndị na-ahụ maka ọrụ, ndị dọkịta, ndị mmemme na ihe ọ bụla m maara mara banyere Modafinil ma ọ bụ jiri ya onwe ya. N'agbanyeghị na ọ na-arịwanye elu, mmadụ ole na ole maara otú Modafinil si arụ ọrụ n'ezie.
Nke ahụ bụ obere okwu, nyere 1) ọtụtụ n'ime ihe Modafinil ji mee ihe-aha, nke pụtara na ọ bụ na labs random na India, na 2) ọ ga - eme ka ọ bụrụ ihe na - ewu ewu na oge. Dị ka ndị dị otú ahụ, ọ bara uru ịbịghachi azụ maka nkeji na-amuta banyere obere mpi a na-acha ọcha ka anyị na-ewe maka ọrụ.
3.How Iji jiri modafinil?
Modafinil na-abịa dịka mbadamba nkume iji were n'ọnụ. A na-ewerekarị ya otu ụbọchị ma ọ bụ na-enweghị nri. Ọ bụrụ na ị bụ ewere modafinil ịgwọ narcolepsy ma ọ bụ OsAHS, ị ga-ewere ya n'ụtụtụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe iji dozie nsogbu ụra na-arụ ọrụ, ị ga-ewe ya 1 hour tupu mmalite nke ngbanwe ọrụ gị. Were modafinil n'otu oge kwa ụbọchị. Adịghị agbanwe ụbọchị nke ụbọchị ị na-ewere modafinil n'ekwughị dọkịta gị. Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ngbanwe ọrụ gị amaliteghị n'otu oge kwa ụbọchị. Soro ntuziaka ndị dị na akara aha gị na nlezianya, jụọ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ ike ịkọwa akụkụ ọ bụla ị na-aghọtaghị. Were modafinil kpọmkwem dị ka a gwara gị.
Modafinil nwere ike ịdị na-akpụ akpụ. Ejila ọgwụ buru ibu, buru ya ugboro ugboro, ma ọ bụ were ya ruo ogologo oge karịa dọkịta gị nyere iwu.
Modafinil nwere ike ibelata ụra gị, ma ọ gaghị agwọ nsogbu ụra gị. Gaa n'ihu na-etinye modafinil ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-adị gị mma. Akwụsịla iji modafinil n'ekwughị dọkịta gị. Biko dozie usoro modafinil na ị ga-adịkwu mma.
E kwesịghị iji modafinil mee ihe ebe ị na-ehi ụra nke ọma. Soro ndụmọdụ dọkịta gị gbasara àgwà ọma ụra. Nọgide na-eji ngwaọrụ ọ bụla na-eku ume ma ọ bụ ọgwụgwọ ndị ọzọ dọkịta gị nyere iwu iji mesoo ọnọdụ gị, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere OSAHS.
4.Olee ka m ga - eji modafinil (Provigil)?
Mee kpọmkwem dị ka dọkịta gị si chọọ. Ejila buru ibu ma ọ bụ obere ma ọ bụ karịa ogologo oge. A na-enyekarị modafinil maka izu 12 ma ọ bụ obere. Soro ntuziaka na akara aha gị.
Nri a na-abịa site na ntụziaka maka ọrịa iji mee ihe dị mma ma dị irè. Soro ntuziaka ndị a nke ọma. Jụọ onye dọkịta gị maọbụ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.Modafinil a na-ewerekarị ya kwa ụtụtụ iji gbochie ụra ehihie, ma ọ bụ 1 awa tupu mmalite nke ngbanwe ọrụ iji mesoo nsogbu ụra oge ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-ewere modafinil iji na-emeso ụra nke ụbụrụ na-ehi ụra na-egbochi, ị pụkwara ịgwọ ya nrụgide ụgbọ elu na-aga n'ihu n'ihu (CPAP) igwe. Igwe a bụ windo ikuku nke ejikọtara ya na ihe nkpuchi nke na-agbapụ ikuku na-agba ume n'ime imi gị mgbe ị na-ehi ụra. Mgbapụta anaghị eme ka ị na-eku ume, mana ike nke ikuku na-enyere aka ịmeghe ikuku gị iji gbochie igbochi.
Akwụsịla iji igwe CPAP gị n'oge ụra ma ọ bụrụ na dọkịta gị agwa gị. Ngwakọta nke ọgwụgwọ na CPAP na modafinil nwere ike ịdị mkpa iji kacha mma mesoo ọnọdụ gị.
Modafinil agaghị agwọ ọrịa mberede obstructive ma ọ bụ mee ihe kpatara ya. Soro ntuziaka dọkịta gị gbasara ọgwụgwọ ndị ọzọ gị maka nsogbu a. Talk na dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nọgide na-enwe ụra oke ụra ọbụna mgbe ị na-ewere modafinil.Kụpụta ọgwụ a anaghị ewe ebe ihi ụra buru ibu.Dọba na okpomọkụ dị elu site na mmiri na mmiri okpomọkụ. Tụkwasị na nke ahụ, usoro ọgwụ momafinil ga-akwado bụ 30-50mg.
5.The mmetụta nke Modafinil raw ntụ ntụ
Uru nke Modafinil raw ntụ ntụ
Uru ndị dị na modafinil dịgasị iche iche ma nyochaa ọtụtụ n'ime afọ iri gara aga. Na nke a, nke a bụ n'ihi agha na mmasị gọọmenti na modafinil dịka ngwá ọrụ nke ndị agha na ndị na-anya ụgbọelu ndị na-arụ ọrụ ọgụ n'okpuru ọnọdụ ụra na-efunahụ.
Dika omumu otutu omumu, enwere uzo di ike mgbe ike gwuru eji modafinil . Ndị ọrụ ndị na-enweta ụra ehi ụra ma ọ bụ nwee mmerụ ọbara na-achọpụta na arụmọrụ ha na-abawanye elu mgbe ha jiri modafinil (ma ọ bụ na-adaba na mmiri).
Uru ọzọ nke modafinil bụ maka ikike izu ike zuru oke. Modafinil nwere ike imeziwanye ikike uche, nke a na-atụle site n'oge mmeghachi omume, ebe nchekwa ọrụ, na ule ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na uru ndị a na-abaghị maka ndị na-abụghị ndị na-ehi ụra, ndị doro anya ka ndị okenye nwere ike ịhụ uru uru na-eme site na iji modafinil.
Otu n'ime ihe kachasị amasị maka modafinil bụ nlebara anya, ncheta, na itinye uche. Ọ bụ ezie na ihe ndị a nile yiri usoro ha dị ka "ịmụrụ anya," ha dịtụ iche na nyocha sayensị. Ọnụ ọgụgụ nke akwụkwọ nyocha na-egosi na modafinil nwere mmetụta dị mma na ihe ndị a nile.
Mmetụta dị iche iche nke modafinil raw ntụ ntụ
Isi ọwụwa, ọgbụgbọ, nervousness, dizziness, ma ọ bụ ụra nke ihi ụra pụrụ ime. Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime nsogbu ndị a nọgidere ma ọ bụ na-aka njọ, gwa dọkịta gị ma ọ bụ ọkachamara n'ahịa ọgwụ.
Gwa onye dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta dị oke njọ, gụnyere: ngwa ngwa ngwa ngwa / ụkọ / mgbaka, mgbanwe mgbanwe uche / ọnọdụ (dị ka ọgba aghara, mgbagwoju anya, ịda mbà n'obi, mmebi ahụ, echiche ndị na-adịghị mma banyere igbu onwe onye).
Nweta enyemaka ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta dị oke egwu, gụnyere: obi mgbu.
Ọrịa dị oké njọ nke na-eme ọgwụ a abụghị obere. Otú ọ dị, nweta enyemaka ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na ịchọrọ mgbaàmà ọ bụla nke mmeghachi omume nhụjuanya dị njọ, gụnyere: ọkụ, ụbụrụ lymph na-acha ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, itching / swelling (karịsịa nke ihu / ire / akpịrị), oké ugwoju, nsogbu na-eku ume.
Nke a abụghị ndepụta zuru ezu nke ga-ekwe omume mmetụta. Ọ bụrụ na ịchọrọ nhụpụta ndị ọzọ edepụtara n'elu, kpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ.
6.Ọ dị mma maka modafinil na boosting brainpowder
Ndị mmadụ nọ na-achọ ụzọ ha ga - esi mee ka ụbụrụ ha sikwuo ike ma eleghị anya n'ihi akụkọ ihe mere eme nile. Na narị afọ gara aga, nkà mmụta sayensị ekpughewo ọgwụ ole na ole na-ekwe nkwa, ma ọ bụ naanị modafinil agafewo ule siri ike nke mmelite obi.
Otú ọ dị, e nwere ezigbo ihe ọ bụla maka aha ahụ: modafinil (nke a na - erekwa dị ka ihe atụ) .Ọgwụ a-ejikarị mee ihe maka ịrịa ọrịa ụra - nwere ike ịbụ ọgwụ mbụ nke ụwa, dịka usoro nhazi ọhụrụ dị. , na-eme ka mmụta dị mma, ma na-agbanye "ọgụgụ isi" - nke anyị na-eji edozi nsogbu ma na-eche echiche nke okike. na ọ na-eme ihe niile na-enweghị àgwà ịṅụ ọgwụ nke caffeine (nakwa na-enweghị ụdị ihe ọṅụṅụ dị ụtọ, ma nke ahụ bụ na ọ bụ obere ego ị ga-akwụ ).
Modafinil, nke edepụtara na United States ebe 1998 na-emeso ọnọdụ metụtara ihi ụra dị ka narcolepsy na ụra na-ehi ụra, na-amụba anya dị ka caffeine. Otutu ihe omumu achotara na o nwere ike inye ndi ozo ndi ozo, ma o bu ihe ndi ozo. Iji kpochapụ mgbagwoju anya, ndị na-eme nchọpụta mgbe ahụ na Mahadum Oxford nyochara ihe ọmụmụ 24 nke e bipụtara n'etiti 1990 na 2014 nke na-elele anya modafinil na-emetụta cognition. Na nyocha ha, nke e bipụtara n'afọ gara aga na European Neuropsychopharmacology, ha choputara na ụzọ eji eji nyochaa modafinil emetụta mmetụta dị ukwuu. Nnyocha nke na-ele mmetụta dị iche iche na arụmọrụ nke ọrụ dị mfe-dị ka ịpị otu bọtịnụ mgbe ị hụrụ otu agba-achọpụtaghị ọtụtụ uru.
Site na nyochaa n'elu, ọgwụ ọ bụla iji mee ka ọgụgụ isi nwee mmetụta dị mkpa na mkpa ka eji nlezianya mee ya .Ọ bụrụ na ị na-atụ ụjọ na mmetụta ndị ọzọ ga-eri gị, mgbe ahụ, lee Modafinil ka ọ bụrụ ụzọ ị kacha mma.
ụfọdụ Ọkachamara nke ọgụgụ isi na ahịa
Mgbe ọtụtụ afọ nke data ọgwụ na ahụmahụ ahụike gosipụtara na anyị achọtawo ihe ndị a nwere ike ime nke ọma meziwanye ọgụgụ isi, ma ọ dị mkpa ka echetara na ọgwụ ọ bụla ejikọtara ya na mmetụta ụfọdụ dị mkpa, ọ dị mkpa iji ọnụ ahịa ya.
Caffeine: Otu n'ime ihe ndị na-akpali akpali na nke kachasị ewu ewu. Ndị mmadụ ghọtara na ọtụtụ narị afọ gara aga, ọtụtụ narị afọ (ikekwe ọtụtụ puku afọ gara aga). Ọ nwere ike ime ka nchekwube na nlebara anya; Otú ọ dị, mmetụta dị mkpụmkpụ, na ndidi na-ewuli ngwa ngwa.
Nicotine: Nakwa ihe na-akpali akpali, jiri ọtụtụ narị afọ mee ihe maka usoro ọgwụgwọ. Ọ bụ ihe na-eri ahụ ma nwee ọtụtụ mmetụta dị ize ndụ.
Amphetamine (Benzedrine, Adderall): Ebu ụzọ dee na 1887. Benzedrine bụ ọgwụ mbụ iji na-emeso ịdị na-emetụta ụmụaka. Amphetamine nwere ike ime ka uche na ebe nchekwa dịkwuo norepinephrine na dopamine n'ime ụbụrụ, ma ụlọ ahụ nwere ike ịṅụ ahụ, ọ na-enwekwa mmetụta dịgasị iche iche, gụnyere mịpractivity, ọnwụ nke agụụ, ụra na-atụ ụjọ, ọbụna psychosis.
Methylphenidate (Ritalin): Nke mbụ zụrụ 1954 ma dezie ya na 1960s maka ịgwọ hyperactivity. Ọ ghọrọ ewu ewu maka ADHD na 1990s. Dị ka amphetamine, ọ nwere ike melite ebe nchekwa na elekwasị anya maka ndị nwere ADHD, ma ana-ejikwa ya-aha dị ka ọmụmụ na enyemaka ọrụ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ka Ritalin nwee ndidi karịa oge.
Acetylcholinesterase inhibitor (Aricept): Akwadoro iji mesoo ọrịa Alzheimer na 1990s. E gosipụtawo ya n'ọmụmụ ihe ụfọdụ iji mee ka nchekwa na nlebara anya na ndị nwere ahụ ike.
Armodafinil eji eme ihe banyere ụra oké ụra kpatara ụfọdụ ụra ụra. Nke a na-agụnye akwara ụbụrụ, ụra ehi ụra, na ịmalite nsogbu ụra nke ihi ụra.
Modafinil: A na - eji ọgwụ ọjọọ eme ihe na mbụ. Ọ pụkwara ime ka arụ ọrụ ahụ dịkwuo mma, karịsịa mgbe ị na-arụ ọrụ ndị siri ike. Ndị ọkachamara adịghị ama n'aka otú modafinil si arụ ọrụ ma ọ bụ ihe mmetụta dị ogologo nke modafinil ga-adị ka ya.
Armodafinil vs Modafinil: nke dị Mma?
"Ya mere, olee nke kaara gị mma? Ajụjụ a dị nso na-agaghị ekwe omume ịza dị ka onye ọ bụla dị adị n'ezie, ma m ga-eso m ahụmahụ ma ọgwụ ọjọọ nke nwere ike inyere gị aka ikpebi.
Agha ngwa ngwa ma dị mkpa: tupu m aga n'ihu, m ga-achọ igosipụta na enweghị m ọrụ maka ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ onye ọ bụla na-ere ọgwụ. Enweghị m njikọ ọ bụla maka ọrụ ndị a. N'ikpeazụ, enwere m ọgwụ iwu maka modafinil nke m nwetara site n'aka onye ọrụ obodo m. Adịghị m dọkịta, amaghị m akụkọ gbasara ahụike gị na amaghị m ihe gbasara mkpụrụ ndụ gị, ya mere, ọ bụghị ụdị isiokwu a ka ọ bụla ị ga - eji nweta ọgwụgwọ ọ bụla. M na - ekwusi ike na gị na onye ọkachamara maara ihe, ewere modafinil ma ọ bụ armodafinil.
Iji mee ka m tụnyere ihe ziri ezi dị ka o kwere mee, m na-emejuputa iwu ndị a mgbe m na-etinye ogige a. Na mbu, ekpebiri m iji onye ọrụ na-enye ma modafinil na armodafinil m kpebiri iji Sun Pharma, bụ ndị dabeere n'India na imepụta modafinil na armodafinil n'okpuru akwụkwọ 'Modalert' na 'Waklert'. ndị na-ebute ngwaahịa na India (Edeela m nyochaa banyere otu onye na-ere ahịa na ebe a).
Enwekwara m onwe m nkwenye nọmba, ụbọchị nhazi ma gosipụta onyinye ahụ site na spectrometer spectrum iji hụ na m na-emepụta ngwaahịa ziri ezi.Tolerance bụkwa ihe esemokwu na modafinil na armodafinil dịka ha nwere ogologo oge 15 nkeji ọkara.N'ikwa jikwaa nke a, ekpebiri m ka m gbanwee usoro m nke ọ bụla: ụbọchị abụọ na ụbọchị anọ, nke nyere oge m oge zuru ezu iji mezuo ụlọ ahụ tupu ịgbanwuo ogige.
N'ikpeazụ, dị ka armodafinil nwere nanị 'ọrụ' ọkara nke modafinil, ụdị ọgwụgwọ dị irè bụ 0.50: 1.00. M ga-ewere 300mg nke modafinil iji nweta nchekasị a na-atụgharị uche ya, ya mere, 150mg armodafinil bụ ọgwụ mgbochi m jiri.
Nyochaa nke modafinil site na ahụmahụ ụfọdụ
"Echere m na ụzọ kachasị mma iji tụnyere ọgwụ abụọ ahụ bụ ịkọwa ụzọ nke ọ bụla n'otu n'otu. Mbụ, m ga-akọwa modafinil. Na mmetụta nke modafinil ịmalite ịnara ihe gbasara 40 nkeji mgbe ị gụchara dose ahụ. Ị gaghị enweta ọsọ ọsọ (dị ka ị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe) kama ọ bụ ịhụ na anya gị na-acha mbara, ụbụrụ gị 'na-agbapụ'.
M na-atụ aro ka ị mee ndepụta nke ihe dị mkpa ịme tupu ị na-eji modafinil (na armodafinil) dịka ị ga-enwe ike ịchịkwa nlekwasị anya gị n'ụzọ dị irè karị .Ọ na-akawanye mma. Mgbe awa abụọ gachara, ị ga-ahụ ọnọdụ obi dị elu na ọgba aghara iji mezuo nnukwu ihe. Ị ga-enwe obi ụtọ ka ị na-akụda ọrụ gị wee nwee obi ụtọ na ị na-arụ ọrụ maka ihe dị ukwuu. Na akara elekere anọ ahụ, ụbụrụ gị ka ga-agbasi ike ma ị ga-elekwasị anya na ọrụ gị.
Ọ bụrụ na usoro ọrụ gị chọrọ àgwà na-agbanyeghị (dịka m mere) ị ga-achọ enwe mmetụta nke ukwuue, ma ọ bụ naanị banyere isiokwu metụtara ọrụ (ọ bụghị ikwu okwu mkparị). Ị ga - aghọ nwoke / nwanyị na - eje ozi ma ndị gbara gị gburugburu ga - ahụ maka otu abawanye na arụpụta ọrụ gị.Mgbe akara ngosi nke 6 ga - agagharị, ị ga - ahụ onwe gị n'okporo ụzọ. Ị nwere ike ịnọgide na-agbanye nnukwu ọrụ maka elekere 5 ọzọ, ma ọ bụ na ị nwere ike ịmalite izuike ma nwee mgbede nkịtị.Le ụtụtụ mgbe ị gachara, ị gaghị enwe 'ntutu' ma ị ga-enwe mmetụta yiri nke a ụbọchị abụọ na-esote mgbe e kwughachiri usoro ọgwụgwọ.
Anaghị m atụ aro na ị ga-eji ọgwụ a karịa ụbọchị 3 n'otu ụbọchị (ma wepụ ụbọchị 4) dị ka a ga-esi gbanwee mmetụta ndị ahụ n'ihi nkwụsị nkwụsị ọsọ. Nye oge gị iji wepụ onyinye na usoro gị ka ị nwee ike ịnụ ụtọ mmetụta zuru oke.
Zụrụ modafinil raw ntụ ntụ si AASraw
Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ akwụkwọ Modafinil ntụpọ n'igwe, ma ọ siri ike zụta Ezigbo Modafinilntụ ntụ n'elu. E nwere ọtụtụ ebe na-ere ngwaahịa ụgha na ahịa. ya mere, mgbe ịzụtara Modafinil ntụ ntụ n'igwe, ịkwesịrị ịhọrọ ezigbo source.Such as AASRAW from china.
Modafinil ntụ ntụ site na AASRAW bụ ihe a na-achọsi ike, ihe kacha mma ma dị mma na modafinil na ahịa. AASRAW bụ ugbu a kacha mma ire modafinil ntụ ntụ online na ọtụtụ puku ndị ọrụ na-arụ ọrụ banyere ya potency.modafinil bụ Eugeroic ma ọ bụ na mfe okwu, a wakefulness na-akwalite gị n'ụlọnga. Mmetụta nke modafinil gunyere ntụrụndụ, mmelite nke uche, mmelite ọnọdụ uche, ncheta na n'ọnọdụ ụfọdụ ịdị nwayọọ euphoria.Ifuru na ịchọrọ mma n'enweghị ọkụ a oghere n'akpa gị, zụta uhie aasraw ugbu a!
isi na inye Anabolic Steroids raw powder (Testosterone, Trenbolone, Boldenone, Nandrolone, Drostanolone, Methenolone, SARMS, wdg), PCT ọgwụ raw ntụ ntụ.
Ihe ndị si n'aka AASRAW
1. Akwa mma na asọmpi ego
2. Nkwenye ngwa ngwa ma dị mma
4. Ụkpụrụ Atọ
Gị anyị online na-ere ọgwụ ma jupụta n'usoro nke Modafinil. Kọwaa ebe ị na-ebufe, ọtụtụ ngwaahịa na ụzọ ịkwụ ụgwọ. N'ime oge nke 30 nkeji, ị ga-enweta nkwenye nke usoro gị. A ga-enye ya n'ime ụbọchị azụmahịa ụbọchị 10www.aasraw.com.
Tags: modafinil raw effects
Kedu ihe DMAA ntụ ntụ ji mee ihe na bodybuilding?	Methenolone enanthate maka ire si methenolone enanthate ntụze soplaya na China